Fety fanasana roa - Church of the World of God Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-02 > Fety roa
Ny famaritana mahazatra indrindra momba ny lanitra, mipetraka eo ambonin'ny rahona, mitafy akanjo mandry, ary mitendry lokanga dia tsy misy ifandraisany amin'ny fomba ilazan'ny soratra masina ny lanitra. Mifanohitra amin'izany kosa, ny Baiboly dia mamaritra ny lanitra ho toy ny fety lehibe, toy ny sary amin'ny endrika lehibe indrindra. Misy sakafo matsiro sy divay tsara ao amin'ny orinasa lehibe. Io no fandraisana mariazy lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra ary mankalaza ny fampakaram-badin'i Kristy miaraka amin'ny fiangonany. Ny kristianisma dia mino an Andriamanitra izay tena falifaly sy maniry indrindra ny hiara-hankalaza amintsika mandrakizay. Nahazo fanasana manokana ho antsika amin'ity fanasana fety ity ny tsirairay amintsika.
Vakio ny teny ao amin’ny Filazantsaran’i Matio: “Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fampakaram-bady ho an’ny zanany. Ary naniraka ny mpanompony izy hiantso ny olona nasainy ho amin'ny fampakaram-bady; nefa tsy te ho avy izy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa koa izy ka nanao hoe: Lazao amin'izay nasaina hoe: Indro, efa voavoatra ny haniko, efa voavono ny ombiko sy ny ombyko, ka efa voavoatra avokoa; tongava amin'ny fampakaram-bady!" (Matio 22,1- iray).
Indrisy anefa fa tsy azontsika antoka mihitsy na hanaiky ny fanasana. Ny olanay dia ny mpanapaka an’izao tontolo izao, dia ny devoly, no nanasa antsika ho amin’ny fanasana. Toa tsy dia hendry loatra isika mahita fa tena samy hafa tokoa ireo fety roa ireo. Ny tena maha samy hafa dia ny hoe raha te hiara-misakafo amintsika Andriamanitra, dia ny devoly kosa te hihinana antsika! Ny Soratra Masina dia manazava izany. « Mahonòna tena, ka miambena; fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany »(1. Petrus 5,8).
Fa maninona no sarotra be?
Manontany tena aho hoe maninona no sarotra ho an'ny olombelona ny misafidy ny fetin'ny Andriamanitra sy ny an'ny devoly, eny eo amin'Andriamanitra, ny Mpamorona antsika, sy i satana, izay te-handringana antsika. Angamba izany satria tsy azontsika antoka mihitsy hoe karazana fifandraisana inona no tadiavintsika amin'ny fiainantsika manokana. Ny fifandraisan'olombelona dia tokony ho toy ny karazana fety. Fomba entina mamelombelona sy mifampahery. Dingana iray izay iainantsika, mivoatra ary matotra rehefa manampy ny hafa hiaina, hivoatra ary ho matotra koa isika. Na izany aza, mety misy ny parodière diabolical azy io, izay iaraha-miasa toy ny mpihinan'olona.
Ny mpanoratra jiosy Martin Buber dia nilaza fa misy karazana fifandraisana roa. Ny karazana iray dia nofaritany amin'ny hoe "fifandraisana I-You" ary ny iray kosa amin'ny hoe "fifandraisana I-It". Amin'ny fifandraisana I-You dia mifampitondra toy ny mitovy izahay. Mifankahita isika, mifampianatra ary mifanaja fa mitovy. Amin'ny fifandraisana I-id, etsy an-danin'izany, dia mifampitondra toy ny olona tsy mitovy isika. Izany no ataontsika rehefa mihevitra ny olona ho mpanome tolotra na loharanom-pifaliana fotsiny na fomba ahazoana tombony na tanjona kendrena fotsiny isika.
Rehefa manoratra ireo teny ireo aho dia tonga ao an-tsaiko ny lehilahy iray. Andao hatao hoe Hector izy, na dia tsy izany aza no tena anarany. Menatra aho milaza fa mpitondra fivavahana i Hector. Rehefa miditra ao amin'ny efitrano iray i Hector dia mijery olona manan-danja izy. Rehefa eo ny eveka dia hanatona azy mivantana izy ary hampiditra azy amin'ny resaka. Raha misy ben'ny tanàna na olo-manan-kaja sivily hafa eo dia izany koa no izy. Toy izany koa ny mpandraharaha manankarena. Koa satria tsy iray aho, dia nahalana izy niresaka tamiko. Nampalahelo ahy ny nahita an'i Hector halazo nandritra ny taona maro, na amin'ny lafiny birao izany ary, Matahotra aho, amin'ny resaka fanahiny manokana. Mila fifandraisana I-Ianao izahay raha te hitombo. Ny fifandraisana I-id dia tsy mitovy mihitsy. Raha mihevitra ny hafa ho toy ny mpamatsy tolotra isika, ny vilona ho an'ny asa, ny tohatra fiakarana dia hijaly isika. Ho mahantra ny fiainantsika ary hahantra koa izao tontolo izao. Ny fifandraisan'ny izaho sy ianao dia zavatry ny lanitra. Tsy izany ny fifandraisana I-It.
Ahoana ny fahitanao manokana ny lanjan'ny fifandraisana? Ahoana ny fomba itondranao ny postman, ny lehilahy fako, ny vehivavy mpivarotra ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe, ohatra? Ahoana ny fomba itondranao ny olona sendra mifanena aminao any am-piasana, miantsena, na amin'ny fiaraha-monina? Raha mitondra fiara ianao, ahoana no itondranao ny mpandeha an-tongotra, ny bisikilety na ny mpamily hafa? Ahoana no itondranao ny olona ambany kokoa noho ny anao? Ahoana no itondranao ny olona sahirana? Io no mampiavaka ny olona tena lehibe izay entiny manao izay hahatsapana ho tsara amin'ny hafa ihany koa, raha ireo izay kely sy malemy fanahy kosa dia mazàna manao ny mifanohitra amin'izay.
Taona vitsivitsy lasa izay dia nanana antony hanoratana tany amin'ny Arsevekan'i Desmond Tutu aho. Nahazo taratasy nosoratana tanana avy any aminy aho izay mbola sarobidy mandraka androany. Io lehilahy io dia ampy ho an'ny hafa hahatsapa ho lehibe koa. Ny iray amin'ireo antony nahombiazana tamin'ny fahombiazan'ny Vaomieran'ny fahamarinana sy ny fampihavanana any Afrika Atsimo dia ny fanajana tsy misy fepetra nasehony ho an'ny olona rehetra nihaona taminy, eny fa na dia ireo izay toa tsy mendrika izany aza. Nanolotra fifandraisana I-Oe ho an'ny rehetra izy. Tamin'ity taratasy ity dia nampahatsiahy ahy fa mitovy aho - na dia azoko antoka aza fa tsy marina izany. Tsy nanao afa-tsy tamin'ny fety tany an-danitra izy, izay handraisan'ny tsirairay anjara amin'ny fety ary tsy hisy ho an'ny liona. Ary ahoana no ahazoantsika antoka fa hanao toy izany koa isika?
Mihainoa, valio ary mifandraisa
Voalohany, tokony handre ny fanasan’ny Tompo antsika isika. Henontsika ao amin’ny soratra masina samihafa izy ireny. Ny iray amin'ireo lahatsoratra malaza indrindra dia avy amin'ny Apokalypsy. Manasa antsika Izy hamela an’i Jesosy ho ao amin’ny fiainantsika: «Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka handray ny fanasan’ny Tompo, ary izy amiko” (Apokalypsy 3,20). Fanasana ho amin’ny fanasambe any an-danitra izany.
Faharoa, aorian'ny fihainoana io fanasana io dia tokony hamaly izany isika. Satria mijoro eo am-baravaran'ny fontsika Jesosy, mandondona sy miandry. Tsy mandaka ny varavarana izy. Tokony hanokatra azy io isika, manasa azy eo amin'ny tokonam-baravarana, hanaiky azy manokana eo amin'ny latabatra ho Mpanavotra, Mpamonjy, namana ary rahalahintsika, alohan'ny hidirany amin'ny fiainantsika miaraka amin'ny heriny manasitrana sy manova.
Ilaina koa ny manomboka miomana amin'ny fety any an-danitra. Ataontsika izany amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fifandraisana I-You betsaka amin'ny fiainantsika araka izay azo atao, satria ny zava-dehibe indrindra amin'ny fety any an-danitra, araka ny omen'ny Baiboly, dia tsy ny sakafo na ny divay, fa ny fifandraisana. Azontsika atao ny mametraka fifandraisana amin'ny toe-javatra tsy ampoizina indrindra rehefa vonona ho azy ireo isika.
Mamelà ahy hitantara tantara marina aminao. Taona maro lasa izay dia nandeha vakansy tany Espana niaraka tamin'ny vondrona namana sy olom-pantatro aho. Indray andro dia nandeha teny ivelan'ny tanàna izahay ary very very fanantenana. Tany amin'ny faritra heniheny no niafaranay ary tsy fantatra intsony izay fomba hiverenana amin'ny tany maina. Taiza no lalana niverina tany amin'ilay tanàna niavianay. Ny vao mainka ratsy kokoa dia ny hariva ary nanomboka nilentika ny andro.
Amin'ity toe-javatra sarotra ity dia fantatray ny Espaniôla lava volo iray izay nankeo aminay namakivaky ny honahona. Mainty hoditra sy volombava izy ary nanao akanjo tsy voaharo sy pataloha fanjonoana lehibe. Niantso azy izahay ary nangataka fanampiana taminy. Gaga aho fa naka ahy izy, nametraka ahy teo an-tsorony ary nitondra ahy ho any amin'ny ilan'ny morontsiraka mandra-pahatongany nametraka ahy tamin'ny lalana mafy. Toy izany koa no nataony tamin'ny vondrona tsirairay avy ary avy eo dia nasehony anay ny lalana tokony haleha. Navoakako ny poketrako ary natolotro azy ny volavolan-dalàna. Tsy naniry na iza na iza tamin'izy ireo izy.
Fa noraisiny kosa ny tanako ka natopiny. Nifandray tànana tamin'ny olon-kafa tao amin'ilay vondrona ihany koa izy alohan'ny namelany anay soa aman-tsara. Tadidiko ny nahamenatra ahy. Natolotro azy ny fifandraisana I-It ary novainy tamin'ny alàlan'ny tànany "I-You" izany.
Tsy nahita azy intsony izahay, saingy imbetsaka aho dia nahatsiaro tena momba azy. Raha tonga any amin'ny fanasana any an-danitra aho dia tsy ho gaga raha mahita azy na aiza na aiza amin'ireo vahiny. Andriamanitra anie hitahy azy. Nasehony ahy ny lalana - ary amin'ny lafiny iray mihoatra ny iray!